Global Voices teny Malagasy » 100 andro ho an’i Alaa: Isain’ny fianakaviana ejipsiana ny andro mandra-pamotsotra azy avy any am-ponja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Desambra 2018 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Alaa Abd El Fattah, saripikan'i Nariman El-Mofty.
Rehefa nandany dimy taona an-tranomaizina, hivoaka ny fonja ilay Ejipsiana bilaogera sady mpikatroka Alaa Abd El Fattah amin'ny 17 marsa 2019. Tamin'ny 8 desambra ny fianakaviany no nanomboka fanentanana  — “100 andro ho an'i Alaa” — mba hiantohana ny hamaranana ara-potoana ny fisaziany am-ponja.
Tsy manamarika ny fiafaran'ny fisazian'i Alaa ny datin'ny volana marsa, fa tetezamita mankany amin'ny dingana farany amin'ny saziny. Aorian'ny famotsorana azy i Alaa dia handany ny aliny ao amin'ny tobin'ny polisy ao an-toerana ao anatin'ny dimy taona manaraka. Ho eo ambany fanaraha-mason'ny polisy izy mandritra izany fotoana izany.
Nosamborina ary nalaina avy tao an-tranon'ny fianakaviany i Alaa tamin'ny Novambra 2013. Mihoatra ny herintaona aty aoriana, tamin'ny Febroary 2015, notsaraina ihany izy ny farany ary nodidiana  higadra dimy taona noho ny “fanomanana” fihetsiketseham-panoherana araka ny lalàna momba ny fanoherana nivoaka taona 2013  izay mandrara ireo karazam-pihetsiketsehana tsy nahazoana alalana. Raha nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana  itsarana ny sivily amin'ny fitsarana miaramila izy tamin'ny 26 Novambra 2013, dia tsy nanana andraikitra i Alaa tamin'ny fanomanana  izany. Nohamafisin'ny Fitsarana Tampony ao Ejipta ny didim-pitsarana azy tamin'ny Novambra 2017.
Nanoritra ireo tanjon’ ny fanentanana ao amin'ny Twitter i Omar Robert Hamilton, zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray na renin'i Alaa:
1.Hampitodika indray ny fifantohana eo an-toerana sy iraisampirenena amin'ny raharaha momba azy mba ho avotsotra tokoa i Alaa amin'ny 17 marsa.
2.Mba hiditra ao amin'ny tsirinkevitry ny المراقبة (‘fanarahamaso’ na ‘teny’) ao amin'ny tsikalakala-mpieritreretan'ny vahoaka. Aorian'ny famotsorana, dia mbola nodidiana handany ny alina any amin'ny tobin'ny polisy mandritra ny *dimy taona* indray i Alaa. Mila mametraka ny sahanasa hanaovana tsindry hanoherana izany izahay.
Na nogadraina na nanaovana famotorana i Alaa nandritra ny androm-piainany isaky ny misy filoham-panjakana hafa Ejipsiana. Tamin'ny taona 2006, nosamborina izy  noho ny nandraisany anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana amin'ny fomba milamina. tamin'ny taona 2011, nandany roa volana tany am-ponja izy , ka tsy nahita ny nahaterahan'ny zanany voalohany, Khaled. Tamin'ny taona 2013, nosamborina  izy ary nohazonina nandritra ny 115 andro tsy misy fitsarana.
Nandritra ny fotoana maharitra i Alaa niasa teo amin'ny sehatry ny tetikasan-teknolojia sy ny tetikasam-pikatrohana ara-politika niaraka tamin'ny vadiny, Manal Hassan. Nipoitra avy amin'ny fianakaviana malaza amin'ny fanandrata-teny momba ny zon'olombelona izy, ao anatin'izany ilay mpisolovavan'ny zon'olombelona antsoina hoe Ahmed Seif El Islam , rain'i Alaa, izay nigadra imbetsaka nandritra ny fitondran'i Hosni Mubarak. Mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny anabavin'i Abd El Fattah, i Mona sy i Sanaa Seif izay efa ela tao amin'ny fanentanana hanoherana ny fitsarana miaramila atao amin'ny sivily. Tamin'ny taona 2016 i Sanaa nihinana am-ponja  enim-bolana noho ny fanompana manampahefam-bahoaka ofisialy.
Ny didy azon'i Alaa dia mitovy amin'ny an'ireo Ejipsiana maro hafa izay tany am-ponja noho ny fikatrohan-dry zareo. Maro dia maro tokoa ny gadra politika fa mahatratra 60.000  ao Ejipta, hoy ny filazan'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona. Ireo nosamborina noho ny antony politika matetika ao Ejipta tratran'ny  fampanjavonana an-katerena, fampijaliana, fampitomboana ny andro ihazonana vonjimaika alohan'ny fitsarana ary ny fanokana-monina .
Fanatevenan-daharana ny fanentanana #FreeAlaa
Tao amin'ny taratasy iray nomena ny mpanatrika ny RightsCon, fivoriambe momba ny zo nomerika notontosaina tao Toronto tamin'ny May 2018, nandrisika ny mpanohana azy i Alaa ”hametraka ny demaokrasiany manokana”.
Izany hatrany ny valinteniko amin'ny fanontaniana manao hoe “inona no azonay atao hanampiana?” Mbola mino aho fa ny [famet(r)ahana ny demaokrasia] ihany no hany valiny azo heverina. Tsy hoe izay toerana onenanao, iasanao, hifidiananao, handoavanao hetra ary hanomanana ny toerana izay ahitanao ny ambaindainao bebe kokoa, fa ny fihemorana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona any amin'ny toerana ananan'ny demaokrasia fototra lalina dia azo itokiana fa ampiasaina ho fialàna bala amin'ny fanitsakitsahana mafimafy kokoa ao amin'ny fiarahamonina mbola marefo dia marefo izany zo izany. Itokisako ireo lanonana vao haingana no nampiharihary azy fa betsaka dia betsaka ny filàna famahana izany (fixing). Manantena fatratra aho hahazo aingam-panahy amin'izay ho ataonao amin'ny famerenana amin'ny laoniny azy ity
Ampirisihana ireo te-hanatevin-daharana amin'ny fanentanana “100 andro ho an'i Alaa” handefa” tantara foronina, saripika na hetsika firaisankina” izay ho avoaka indray ao amin'ny tranonkalan'ny fanentanana :
Fanentanana misokatra ho an'ny daholobe izy ity – hametraka hevitra vaovao izahay, saingy mila fihevitra vaovao sy angovo vaovao ho tonga koa. Koa andao hiaraka hihevitra aminay!
Efa araka ny mahazatra ny mahita amin'ny fihodinana faharoa ny fampiantoana teny, koa andao hiara-mientana #FreeAlaa
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/22/132074/
 lalàna momba ny fanoherana nivoaka taona 2013: http://www.hrw.org/news/2013/11/26/egypt-deeply-restrictive-new-assembly-law
 nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana: https://globalvoices.org/2017/12/13/a-detainee-of-all-eras-the-prominent-case-of-egyptian-activist-alaa-abdelfattah/
 Nanoritra ireo tanjon’: https://twitter.com/ORHamilton/status/1071434227068088321
 nandany roa volana tany am-ponja izy: http://www.hrw.org/news/2011/11/15/egypt-free-blogger-held-maspero-case
 nihinana am-ponja: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-sanaa-seif